Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Nitondra nankaiza ny fanamparam-pahefana ?
Inty sy nday: Nitondra nankaiza ny fanamparam-pahefana ?
Endri-panamparam-pahefana iray indray koa no nasehon’ny fitondrana foibe Hvm tamin’ny faran’ny herinandro teo. Tsy inona izany fa ny fandrahonana sy fampihorohoroana, eny mety ho tonga hatramin’ny fanaisorana amin’ny toerany aza, an’ireo tompon’andraiki-panjakana any amin’ny faritra, dia ny any amin’iny faritr’i Diana sy ny distrikan’Ambilobe iny.
Iantefan’izany fandrahonana sy fampihorohoroana izany ny Prefen’ny Faritra Diana sy ny lehiben’ny Distrikan’Ambilobe ary ireo tompon’andraikitra ny filaminana any, satria, hono, tsy nahavita nisakana na nandrara ny famoriam-bahoaka nataon’i Andry Rajoelina. Dia noheverin’ny fitondrana Hvm ho faty antoka ho azy na faharesena pôlitika ho azy ny fahamaroan’ny olona tonga nanotrona an’i Andry Rajoelina.
Ny vanim-potoana ankehitriny dia mampibaribary fa ny mpitondra manao izay danin’ny kibony na manampatra fahefana, dia tsy ela fanapahana eo amin’ny toerany. Efa noporofoin’ny tantara rehetra teto koa ange izany e! Na tamin’ny Repoblika voalohany, teo ambany vahohon’ny Pisodia ny vahoaka. Tamin’ny Repoblika faharoa koa dia nanao ny nataony izany Arema izany. Nodimbiasan’ny fitondrana Homanisma Ekolojika koa ary nolovain’ny Tim. Dia izao hamafisin’ny Hvm izao. Nankaiza avokoa anefa ireo nanampatra fahefana teo aloha rehetra?
Tohizo ihany, ry zalahy, fa fahendrena angamba ny manampatra fahefana rehefa tonga eo amin’ny fitondrana an!